Latest News on Harare - ANI News - Asia’s Premier News Agency
Zimbabwe erupts in anger after 150% fuel price hike announced
Bulawayo [Zimbabwe], Jan 15 (ANI): Hundreds of people on Monday took to the streets here to protest against Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa's decision of announcing a 150 per cent hike in fuel prices, triggering anger and discontent among the masses.
47 dead in Zimbabwe bus collision
Harare [Zimbabwe], Nov 8 (ANI): Two buses collided with each other in southeast Zimbabwe, killing 47 people.
Harare [Zimbabwe], Aug 03 (ANI): President Emmerson Mnangagwa of Zanu-PF - Zimbabwe's ruling party, was on Thursday declared the winner of the first Presidential Elections without the former's successor, Robert Mugabe.
Zimbabwe Elections: 3 killed in Harare protests
Harare [Zimbabwe], Aug 02 (ANI): As many as three people were killed on Wednesday as clashes between protesting opposition supporters and security forces erupted in Zimbabwe's capital Harare.
Taylor, Cremer dropped from Zimbabwe T20I squad for tri-series
Harare [Zimbabwe], June 21 (ANI): Former skippers Brendan Taylor and Graeme Cremer have been left out of the Zimbabwe T20I squad for the tri-series, featuring Australia and Pakistan, beginning July 1 at Harare Sports Club.
Director of Zimbabwe Cricket charged under ICC Anti-Corruption Cod
New Delhi [India], June 11 (ANI): The International Cricket Council (ICC) has charged Enock Ikope, chairman of the Harare Metropolitan Cricket Association and director of Zimbabwe Cricket, with three counts of breaching the ICC Anti-Corruption Code.
Aussies to tour Zimbabwe for T20I tri-series
Melbourne [Australia], April 11 (ANI): Australia are all set to travel to Zimbabwe for the first time in four years when they play in the T20I tri-series, also featuring Pakistan, in July this year.
Dubai [UAE], March 27 (ANI): The International Cricket Council (ICC) has announced that it has suspended Rajan Nayer, the Treasurer and Marketing Director of the Harare Metropolitan Cricket Association, from all cricket activity for 20 years after he accepted a charge of breaching the ICC An
Harare [Zimbabwe], Mar 25 (ANI): Afghanistan beat West Indies by seven wickets to win the ICC Cricket World Cup Qualifier 2018, at the Harare Sports Club, on Sunday.
ICC WC Qualifiers: Samuels guides Windies to thumping win over Zim
Dubai [UAE], March 20 (ANI): Marlon Samuels came to West Indies' rescue yet again as he guided his side to a comfortable four-wicket win over Zimbabwe in their Super Six match of the ICC World Cup Qualfiers at the Harare Sports Club last evening.
Afghanistan's Mohammad Shahzad suspended for next two matches
Harare [Zimbabwe], Mar. 8 (ANI): Afghan wicketkeeper-batsman Mohammad Shahzad on Wednesday was suspended for Afghanistan's upcoming two matches in the ICC Cricket World Cup Qualifier 2018.